Tiled, windo jikọtara ma ọ bụ windo windo na Windows 10 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Tiled, windo jikọtara, ma ọ bụ windo jikọtara na Windows 10
Windows 10 gụnyere ọtụtụ ụzọ iji dozie windo mepere emepe na-akpaghị aka, mana ha zoro ezo ma ọbụlagodi na ịpị otu pịa na ogwe ọrụ, ọ bụrụ na anyị amaghị, anyị nwere ike ịkwụsị ileghara ha anya ruo mgbe ebighi ebi.
Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-ebugharị windo n'otu akụkụ, ọ ga-ekwe omume ịme windo windo site na ịkesa ihuenyo na abụọ ma ọ bụ ọbụna anọ (site na ịdọrọ windo na nkuku). Nwere ike ime otu ihe ahụ site na ịpị oghere na oghere na ogwe aka nri site na iji bọtịnụ aka nri na iji nhọrọ Tinye windo n'akụkụ ibe ya.
Ka ịpị nri òké bọtịnụ, ị nwere ike họrọ nhọrọ gosi windo echekwara, nke bụ ụzọ ọzọ iji debe ha, na-ekewa nha nha nhata.
Site na ụzọ mkpirisi keyboard, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike pịa igodo ahụ ọnụ Windows + akụ elu iji mepee windo, pịa igodo ahụ Windows + akụ ala iji laghachi windo ka ọ pere mpe ma pịa igodo ọzọ Windows + akụ ala iji belata windo. na taskbar.
Na mmemme dị ka Powertoys maka Windows 10, ọ ga-ekwe omume ịrụ ọrụ ndị ọzọ pụrụ iche, dị ka ịmepụta nhazi windo omenala, site na ịhọrọ nha na ọdịdị nke windo ọ bụla mepere emepe.
Anyị ka nwere ike ịchọta ọtụtụ atriums aghụghọ iji hazie windo na desktọọpụ Windows.
N'isiokwu a anyị na-achọpụta ọzọ bara uru, dị mfe iji ma nke ahụ na-eme ka desktọọpụ nwee ezigbo nkasi obi: ohere nke windo cascading, ka i wee nwee ike mepee ihe ruru iri ma ọ bụ karịa gbasasịa na desktọọpụ, na-ahụ aha ha ka i wee jiri anya gị hụ ha. ha niile ma na-ahọpụta ha ngwa ngwa.
Na Windows 10 ị nwere ike pịa aka nri na taskbar ma họrọ nhọrọ "Ghapu windo"iji dochie ha. A ga-ahazi windo niile na-adịghị pere mpe na nchịkọta cascading, otu n'elu nke ọzọ, nke ọ bụla hà nha. Ogwe aha nke windo ọ bụla ga-egosipụta nke ọma, na-eme ka ọ dị mfe ịme pịa otu n’ime ha na cursor òké wee weta windo ahụ na mgbada.Y nwekwara ike pịa akara ngosi ikwu na ogwe ọrụ iji mee ka ha gaa ihu.
Ozugbo emepụtara nsụda mmiri ahụ, enwere ike ịkagbu ya site na ịpị bọtịnụ aka nri ọzọ na taskbar ma họrọ nhọrọ "Megharịa ichie windo niile"Site na menu. Nke a ga-eweghachite nhazi nke windo etu o siri dị na mbụ. Mana, ọ bụrụ na ibugharị naanị otu windo ndị a na-ekpuchi elu, ị nweghị ike imegharị ndokwa cascade.
Rịba ama na windo cascading bụ nhọrọ na Windows 95, mgbe akụrụngwa kọmputa nwere oke na obere mkpebi. Typedị echiche a yiri nke enwetara, rue n'oge na-adịbeghị anya, site na ịpị igodo Windows-Tab n'otu oge (taa na Windows 10 ihe omume na-emepe).
Enweghị USB Flash draịva ma ọ bụ draịva mpụga achọpụtara - Ngwọta niile
Lelee mmemme Windows na akụkọ ihe mere eme
Esi hazie ọrụ na Windows
Otu esi elele Windows Printer History
Gbanyụọ osooso ngwanrọ na Windows iji bulie nkwanye vidiyo
Jikwaa nleba anya abụọ na PC desktọpụ gị gbakwunyere
Etu esi emechi PC
Microsoft .NET Framework, ndozi ma dozie njehie
Dozie njehie Windows site na ndekọ ihe omume
Obere kọmpụta kọmpụta nwere ihe osise na tebụl maka ndị niile na-anụ ọkụ n'obi
Chọta ma hichapụ folda ndị efu na Windows